Semalt Review - Anokurumidza Kugadzira Chigadzirwa Chekushandisa
Tsvina yewebhu yakagadzikana uye yakakurumbira yevatsvaga vewebhu uye makambani, edza kubvisa mazano akawanda paIndaneti kubva kune mawebsite akasiyana-siyana paIndaneti. Nhasi iyo inonyanya kukosha yekuziva ndeyeInternet, uye vazhinji vanotsvaga webhu vanoshandisa iyo zuva rega rega. Python inonyanya kufarirwa uye inobudirira purogiramu mutauro. Zviri nyore kushandisa, uye vatsva vakawanda vekutsvaga webhu vanozvisarudzira kuti vaite mabasa anokurumidza. Somuenzaniso, kana vari kutsvaga kuti vabve mazita, matengo, zvigadzirwa, mazano uye mamwewo data, vanoishandisa. Ichokwadi, Python inopa vashandisi vayo zvishandiso zvinoshamisa zvemabasa aya.
Makomborero ekushandisa Python
Kuzadzisa mabasa avo, vanotsvaga webhutori vanoshandisa mabhuku ePython, inovabvumira kupora mapurogiramu nokukurumidza uye nyore nyore. Zvechokwadi, inopa vashandisi varo nzira dzakanaka dzokutsvaga, kuwana nekugadzirisa avo vakaunganidza data mune mamwe mafaira pamakombiyuta avo.
Vashandisi varo vanogona nyore kuwana dhiyabhorosi data yavanoda kubva kune mawebsite akasiyana-siyana ari pawebhu. Uyezve, inopa vashandisi vayo sarudzo yekugadzirisa basa ravo kuti rishande pane imwe nguva mukati mezuva. Iyo inopawo dhipatimendi yekuendesa mazano.
Kudzidza kuputira mabhuku ekunyorwa kwePython ibasa rakaoma, iro rinopa vashandisi varo vashandi zvinoshamisa uye zvinobudirira zvekusimudzira kushanda kwebhizimisi ravo. Nokuita kudaro, vashandisi vanogona kuva nekujekesa kwakanyatsojeka kuti idzi mahwindo ewebhu zvakagadzirwa sei. Somuenzaniso, ku kupora webhusaiti , inoda kukwanisa 'kutaurirana' pamusoro pewebhu (HTTP), kuburikidza nekukumbira (mapepa ePython). Zvadaro, vanogona kutora zvose data, uye vanofanira kuvabudisa kubva kuHTML (vachishandisa lXML kana Mushonga Wakanaka)
Raibhurari yePython inotarisira kuita webhupiti yekutsvaga basa rakajeka rekutsvaga kwewebhu. Kana zvose zvisiri izvo deta uye uzvisiye kunze uye upe vashandi vayo. Inopa mamwe maitiro makuru, ayo anopa HTML mazita mazita, kuita kuti zvive nyore nyore kune vashandisi. Python ipurogiramu yakanaka, iyo yakagadzirwa kunyanya kumapurogiramu akaita web web scraping. Inopa dzimwe nzira dzakajeka kuti vashandisi vayo vashandure mutambo wepakati. Zvechokwadi purogiramu iyi yemutauro inokurudzirwa pamusoro pezvakanakisisa parses zvePython, saiyo lXML uye yakanyatsochinja. Ichokwadi, inowana data yakavharwa uye inounganidza mashoko ose anodiwa web scrapers mumaminitsi. Kunyanya kunyanya, reLxml mabrasi inobvumira vashandi varo kugadzira chimiro chemiti nekushandisa XPath. Somugumisiro, vanogona nyore kutsanangura nzira inoenda kune chinhu chiri nehumwe ruzivo. Semuenzaniso, kana vashandisi vanoda kubudisa mazita kubva mawebsite, vanofanira kutanga vatanga mumhando ipi ye HTML iyo inogara uye vobudisa deta Source .